Inona No Iraisan’ny Hetsi-panoheran’ny Mpamily Fiarakaretsaka Ao Lisbonne Sy Jakartà ? Uber! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2015 5:17 GMT
Fiarakaretsaka ao Lisbon, Portiogaly. Sary : Manuel Correia (CC BY-SA 3.0)
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity koa i Juliana Harsianti.
Noheveriko fa nifàrana noho ny antony araka ny lalàna ny @Uber_Lisboa. Ny zavatra mifanohitra amin'izany no nanairan'ireo mpamily fiarakaretsaka ahy, ankehitriny tena te-hanandrana azy ity aho!
Talohan'io hetsika goavana io, noraràna tsy handraharaha tao Portiogaly ny Uber araka ny didin'ny fitsarana iray ao Lisbonne. Kanefa, notohizan'ilay orinasa ihany ny fandraharahàny, araka ny lazain'ny tranonkalany.
Tamin'ny fanehoankevitra noho ilay didin'ny fitsarana handraràna ny tolotra, nisy vondron'olon-tsotra nanomboka fanangonantsonia tety anaty aterineto nitakiana ny hanomezana alàlana ny Uber ho afaka mandraharaha ao amin'ny firenena.
Andro telo talohan'ilay hetsiky ny mpamily fiarakaretsaka, nangatahan'ny governemanta Portiogey ny Fiombonambe Eoropeana sy ny Parlermanta Eoropeana mba hanampy amin'ny fifehezana ilay orinasa. Ny tena olana fototra ho an'ireo manampahefana ao Portiogaly dia ny hametraka hoe sehatra fotsiny fanolorana tolotra amin'ny alàlan'ny aterineto ve sa orinasa hanao fitateram-bahoaka ny Uber.
Ny lahatsary eto ambany dia mampiseho vondrona fiarakaretsaka manakana fiara iray mampiasa Uber tsy hitatitra mpizahatany:
Fiarakaretsaka ao Jakarta. Sary : Celica21gtfour (CC BY-SA 3.0)
Volana vitsy taorian'ny nanombohan'ny Uber tao Indonezia, nametraka fitoriana teny amin'ny polisy ny sasany tamin'ireo orinasa mitantana fiarakaretsaka ao Jakarta sy Bandung. Nolazain'ireo mpitory fa ambany ny saran-dalana Uber satria tsy mandoa ny hetra mifanaraka amin'ny tokony haloa aminì'ny fanjakana ilay orinasa.
Nisy orinasa 9 mitantana fiarakaretsaka no nanatevina laharana tamin'ilay hetsi-panoherana sy nameno ilay taratasy fitoriana tany amin'ny polisy. Tao Bandung sy Jakarta, namoaka didy ny goveremanta ao an-toerana fa hoe miasa tsy ara-dalàna amin'ny sehatry ny fitateram-bahoaka ny Uber. Avy eo, nisy fiaraha-miasa napetraka niarahan'ireo governemanta tao an-toerana, ny polisin'ny distrika ary ny ministeran'ny fitaterana mba hampitsaharana ny fandraharahan'ny Uber tsy hanao tolotra fiarakaretsaka. Hoy i Ipung Purnomo avy amin'ny Polisy ao Jakarta :